Sahamin cusub oo loogu talagalay tamarta qulqulka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Sahamin cusub oo loogu talagalay tamarta qulqulka
Jarmal Portillo | | Tamarta biyaha badda, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Tamarta daadka waa nooc ka mid ah tamarta la cusboonaysiin karo oo, sida magaceeda ka muuqata, ay uga faa'iideysato farqiga u dhexeeya heerka badda ee ay sababaan mawjadaha si loo helo tamar. Si kastaba ha noqotee, waa nooc ka mid ah tamarta la cusbooneysiin karo oo wali aad u yar in la horumariyo sababtoo ah wax soo saarkeeda oo hooseeya iyo dhibaatada ay ku qabato helitaanka tamar qaab faa'iido leh.
Si kastaba ha noqotee, mahadsanid mashruuc lagu maalgeliyay lacag ka timid Midowga Yurub, FLOTEC waxay ku guuleysatay inay soo saarto marawaxadaha ay tamarta uga helaan mowjadaha oo leh waxqabad aad u la mid ah kan marawaxadaha dabaysha ka socda. Tani waa diiwaanka taariikhda tamarta la cusboonaysiin karo iyo, wixii ka sarreeya, war wanaagsan oo loogu talagalay jiilka tamarta nadiifka ah ee mustaqbalka.
1 Horumarinta marawaxadaha waxtarka leh
2 Mashruuca Hagaajinta Awoodda
Horumarinta marawaxadaha waxtarka leh
Mashiinka maraakiibta ee ay soo saartay shirkadda 'FLOTEC' (floating Tidal Energy Commercialization) Waxay awood u yeelatay inay soo saarto wax ka badan 18MWh (saacadaha megawatt) XNUMX-saac oo tijaabo ah oo aan kala go 'lahayn. Guushan waxaa loola jeedaa in tamarta qulqulaya ay ka heli karto saldhig suuqyada tamarta dib loo cusboonaysiin karo maaddaama ay ku dhowdahay sida ugu waxtarka badan marawaxadaha dabaysha.
Tamarta ka dhalata hirarka waxaa loo heli karaa si la mid ah tii lagu sameeyay beeraha dabaysha ee badda, laakiin marawaxadaha biyaha lagu dhex shubay. Sidan oo kale, mahadnaqa cufnaanta sare ee biyaha marka la barbar dhigo dabaysha, waxaa suurtagal ah in laga faa'iideysto dhaqdhaqaaqa biyaha ee ay soo saaraan hirarka.
Tamarta daadka waxay leedahay awood tamar oo weyn haddii la horumariyo oo si qoto dheer loo baaro. Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda, awooddeeda si dhib yar ayey isu beddeshay marka loo eego qaybaha tamarta la cusboonaysiin karo sida qorraxda iyo dabaysha Tani waxay qayb weyn u tahay xaqiiqda ah in deegaanka baddu u baahan yahay in wax soo saarka tamarta ay noqdaan kuwo sii waara, adkaysi u noqda daxalka ay soo saarto cusbadu, inaanay saamayn ku yeelan xayawaanka badda iyo dhirta, inay iska caabiyaan dhacdooyinka cimilada daran, iwm Taasi waa sababta, in horumarinta tiknoolajiyada ee tamarta qulqulaya ay ka qaalisan tahay kana adag tahay inta kale.
Mashruuca Hagaajinta Awoodda
Mashruucan waxaa lagu maalgeliyey lacagaha yurubiyanka ah ee loo yaqaan 'FLOTEC' oo loo abuuray si loo wanaajiyo loona isticmaalo awooda abuurista awooda ee badaha ay yeelan karaan. Laydhka mawjadaha, tamarta mawjadaha iyo dabaysha dhulka ka soo baxda labaduba waa noocyo tamarta la cusboonaysiin karo oo gacan ka geysan kara hagaajinta nidaamka deegaanka, waxay gacan ka geysan karaan la dagaallanka isbeddelka cimilada, abuurista shaqooyin cusub iyo wax badan oo ka mid ah tikniyoolajiyadda la cusboonaysiin karo.
Mashruucu wuxuu sidoo kale isku dayaa inuu muujiyo in horumarinta tiknoolajiyada tamarta tamarta ay gacan ka geysan karto yareynta kharashyada iyo halista, hagaajinta kalsoonida bixinta tamarta iyo soo bandhigida tamarta noocan ah qaab ganacsi si loogu daro shabakadda korantada ee dhammaan Yurub.
Marawaxadaha qulqulaya ee la soo saaray, oo ku dhow waxtarkooda sida marawaxadaha badda, Waxaa loogu talagalay inay socotaa in ka badan 20 sano waxaana lagu dhejin karaa ku dhowaad nooc kasta oo badda hoosteeda ah, illaa iyo inta ay qoto dheer tahay 25 mitir. Bishii Abriil ee sanadkan, maraakiibta SR2000 waxay ku guuleysteen inay soo saaraan laba MW oo ah awoodda ugu badan. Si kastaba ha noqotee, kooxda mashruuca waxay ka shaqeynayeen hagaajinta waxtarka waxayna ku guuleysteen inay soo saaraan 18MWh. Si loo hagaajiyo waxqabadka mashiinka marawaxadaha, waxay kordhiyeen dhexroorka rotor-ka laga bilaabo 16 illaa 20 mitir. Tani waxay sababtay koror 50% ah koronto dhalinta. Barnaamijka Imtixaanku wuxuu ka soconayaa Xarunta Tamarta Marinta Yurub (EMEC) ee Orkney, Scotland, UK, halkaas oo tikniyoolajiyadda lahaanshuhu ay ku xirnayd shabakadda korontada ee Orkney si ay awoodda ugu dhoofiso heerar.
Mashruucu wuxuu kaloo baarayaa kororka tamarta iyo waxtarka hydrodynamic si loo yareeyo kharashka iyo dayactirka. Sidaad u aragto, tani waa taariikh muhiim u ah taariikhda tamarta qulqulaya, taas oo ka dhigaysa farqiga u dhexeeya tartamada iyo tamarta la cusboonaysiin karo inta kale mar kasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Sahamin cusub oo loogu talagalay tamarta qulqulka
Manuel Garcia (@ Guure2000) dijo
Waxaa jira tamar nadiif ah oo in kabadan dabooli karta baahida "nin", waxa inaga maqan waa "mashiinka", kaas oo awood u leh uruurinta iyo uruurinta si hufan oo faa'iido leh.
Jawaab Manuel Garcia (@ TURBOMOTOR2000)
Ku duub awoodda la rakibay ee tamarta la cusboonaysiin karo